एउटा भव्य महल भित्रबाट यस्तो आवाज आएपछि… « Gajureal
प्रकाशित मिति: ५ आश्विन २०७५, शुक्रबार १०:५५
कस्तो कुठाँउमा बनेछु म यो सहरिया महङ्गो घर ! बनाउँन थाल्दा त खूब फुर्क्याई फुर्क्याई ठड्याए ! भूकम्पले हल्लाउँछ, थेग्न सक्दिंन भनें तर मलाई अग्ल्याउन उद्धत रहे महत्वकाङ्क्षी मान्छेहरु ! उ बेला उनिहरुको उत्साह नै फरक थियो । यस्तो बनाउँछु, उस्तो बनाउँछु, यतै बुट्टा, उतै बुट्टा , रङ्गी बिरङ्गी बनाउने भन्दै मलाई पनि पुरुक्क् पारे । कैले अधकल्चो बनाएर छोडे । कतै पैसै भएन भनेर रूप रंग समेत बिगारे ।
अजंङ्गको बनाएर ठड्याऊनु मात्र उद्धेश्य हैन रहेछ यी लोभी मान्छेको । बनाउँन्जेल मेरो रूप रंगको कुरा गरे । अब त मलाई टेकेर, चढेर, लिपेर, टाँसेर, बारेर, अनेकौ तिकड़म गरेर टुक्रा टुक्रामा बेच्ने र पैसा कमाउने उद्धेश्य पो रहेछ यिनको ! अब त एकाबिहानै उठेर मै तिर हेरेर लोभिन्छन्, मुख मिठ्याउछन् अनि कतै एक छेउ काटेर हुन्छ वा चिरेर एक मुठ्ठो पैसा समाउने सपना देख्न थाल्दछन् ।
मान्छेको स्वाभाव नै हो, गधालाइ जति करायो उती भारी थोपर्ने । त्यस्तै, मलाई पनी मिलाई मिलाई भरिया बनाइरहेकाछन् । गहिरो, अँधेरो हुनुको कारण मैले सामानको खात लाग्ने गोदाम भइदिनु पर्ने अलि साँघूरो कोठा हुनुको उपज काम नलाग्ने चिज फाल्ने, थन्क्याउने स्टोर बनिदिनु पर्ने, अलिक उज्यालो भुँई तलालाई रक्सी भट्टी बनाएर मै माथि बसेर पिउने, उफ़्रिने, हल्लीदै गएर मेरै डँडाल्नुमा तुर्क्याउने, पान चपाएर मेरै गालामा, अनुहारमा पिच्च पिच्च थुकेर कुरूप बनाउने गर्दछन् ।
यस्तै यस्तै अनेकौ रूप रंगका सँस्था उपसँस्थाका रङ्गी बिरङगी होडिङ बोर्ड र वाल बोर्डले छपक्क ढाकिएको छू म । यसरी ढाकिएको छु कि कतैबाट पनि एक आँखो समेत चिहाउन पाउन्न मैले । मेरै शरीरमा लठारिएर गएका टेलिफोन र बिजुलीका तारले मलाई मात्र हैन, म बसेको बुज्रुक मान्छेहरुको सुन्दर शहरलाइ समेत कुरूप बनाएको कुरा मैले महशुस गरेको छु । तर जन्म र सम्पतिलाइ मात्र जीवन बुझ्ने, कर्तव्यच्युत मान्छेहरुलाई यसको बोध हुने कुरै भएन ।
धिक्कार छ मलाई, एउटा सहरिया धनाड्यको महल भएर ठुला सडक बीचमा उभिनु परेकोमा । महल बनाएर पनि पैसाको लोभमा यसलाई बेचि बेचि आफु चाहि माथि टुप्पोका साँघुरा दुई कोठामा ठिँगुरीने साँघुरो मनका मान्छेको संगतमा परेकोमा ।